एउटा आवाज: धेरै कानून बन्दा अझ अन्याय हुदोरहेछ-NepalKanoon.com
दुब्र्यवहार हुनु नीतिको होइन नियतको समस्या
-अधिवक्ता: दिपक कुमार बिष्ट
मलाई अहिले पनि सम्झना छ म स्कुल पढ्दा देखेको छु सरहरुले केटीहरुको गाला चिमोटने, धाप मार्ने र ढाड सुमसुमाउने काम गर्नु हुन्थ्यो । अहिले बुझ्दा त्यो त एक किसिमको यौन दुव्र्यवहार पो रहेछ ।
हरेक महिलाको जीवनमा दुव्र्यवहार भएको छ । कुनै महिलाले मैले दुब्याबहारको समस्या भोगेको छैन भन्दा त्यो बनावटी कुरा भन्दा हुन्छ, अरू केही हो वा नभएकै हो भन्नेमा विश्वास गर्न सकिदैन ।
अहिले महिलाहरू घरबाट निस्कन पाउनुपर्छ, पुरुष सरह घर बाहीर पनि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्दै एककिसीमको स्वतन्त्रताको कुरामा बढी केद्रीत देखिन्छन । अब देशले नै महिलाको भरोसा र विश्वासमा आँच पुर्याएर बसेको अवस्थामा केवल अव महिलाले आफनो मात्र सुरक्षा, स्वतन्त्रता र आफुले मात्र मौका पाउनुपर्छ भन्ने मुद्दालाई मात्र उठाउदा अलि अपच हुन्छ की भन्ने पनि लाग्छ । तर पनि आवाजहरु उठि रहेका छन वा भनौ आवाजहरु उठिरहन् पर्छ भन्नेहरुको कमी छैन ।
महिलाको पहुँच र नेतृत्वको मात्र होईन आत्मविश्वासको कमीका कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन भन्ने महिलाहरु पनि छन । महीला वृत्तमा नै हुने त्यस्ता खाले चर्चालाई अहिले राज्यका मुख्य तीन पदमा महिला नै आसिन हुन पुग्नुले गतिलो जवाफ दिएको छ ।
महीला काम गर्ने हरके कार्यस्थलमा महीला पिडित छन, दुब्र्याबहारमा परेका छन । यसलाई रोक्न विभिन्न सरकारकै पहलमा वा महीलाकै पहलमा पनि कामै नभएका पनि होईनन । यसैको क्रमको रुपमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ बन्यो ।०७१ मंसिर ५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार एउटा निकै चर्चाको बिषय बन्यो ।
तर यस बिषयमा उपयुक्त सचेतना कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन नसक्दा अझै पनि यो ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो व्यापक रुपमा सुन्न पाइन्छ । नेपालमा यस्ता कतिपय ऐन९कानुन महिलाका पक्षमा बनेका भए पनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष साह्रै नै फितलो देखिन्छ ।
सामाजिक परम्परा एवं पुरातन सोचका कारण महिलामाथि मात्र हिंसा तथा विभेद हुँदै आएको छ भन्ने परिस्थिति अब छैन । तर कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ ले भने महिलामाथि मात्र हिंसा र विभेद हुन्छ भन्ने मान्यतालाई अघि सारेका कारण कार्यस्थलमा हुने हिंसा तथा दुव्र्यवहारका विषयमा मात्र आम जनमानसमा बहस केन्द्रीत हुने गरेको पाईन्छ । तथापि यस बिषयमा मन्थन र बिश्लेषणात्मक बहसको भने कमी रहेको छ ।
सरकारबाट पास भएको कार्यस्थलमा हुने दुव्र्यवहार निवारणका लागि बनेको ऐनमा बिभिन्न संस्थाले चर्को वकालत गरेको बिषय पनि हो । अहिले आएर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काममा भने ती सस्थाहरु सुस्ताएको प्रष्टै देखिएको छ । नेपालमा रहेका गैरसरकारी सस्थाहरु सहयोग रकमको उपलब्धता बिना पाईलो नसार्ने प्रवृतिले गर्दा त्यस्था संस्थाहरुले उठाएका एजेण्डाहरु पनि कतै नियोजित त थिएनन भनेर आम जनमासले आवाज उठाए भने त्यो गलत हुने छैन । त्यसलाई अन्यथा मान्न नहुने पनि देखिन्छ ।
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहारको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको गरिब मानसिकता र पुरातन सोच हो ।
नेपालमा महिलाका पक्षमा धेरै ऐन बनेका छन् । धेरै कानुन बन्दा अझ अन्याय हुँदोरहेछ भन्ने पनि महिलाहरु नै बोल्न थालेका छन । यस्तो तर्क सरिरहेको परिस्थितीमा प्रस्तावना मै दुव्र्यवहारको परिभाषा भित्र के९के पर्छ रु भनी कार्यस्थलमा हुने हिंसाको ब्याख्या गरेको पाईन्छ । तर खेतीपातीमा काम गर्ने किसान महिला, मेलापात घाँस दाउरा गर्ने महीला विरुद्ध वा त्यस्ता नसमेटिएका अवस्थामा हिंसा भए कहाँ जाने रु भन्ने कुरा ऐनले प्रष्ट नगर्नु एक किसीमको कमी छ देखिएको छ अहिले आएको यस ऐनमा । ऐन बन्नु उचित हो तर त्यसको कार्यान्वयन प्रमुख कुरा हो ।
समाजमा जे कुरा हुन्छ काम गर्ने ठाउँ वा अन्य ठाउँमा पनि त्यही हुन्छ । हामीकहाँ नीतिको होइन नियतको समस्या छ । नियति व्यक्ति कहाँ र कसरी हुर्किएको हो त्यसमा भर पर्छ । कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७१ ले हाम्रो समाजमा यस्ता गतिविधि भैरहेको महसुस गरेरै यो ऐन आएको हो । कसैले कुनै कर्मचारी वा सेवाग्राहीप्रति यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको ठहरिए निजलाई कसुरको प्रकृति हेरी कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । तर महिलाहरू उजुरी दिनसक्ने अवस्था मै छैनन् । उनीहरूमा भोलि समाजमा कस्तो स्थिति हुने हो मेरो परिवारले के भन्ला भन्ने त्रास हुन्छ । यसको न्यूनीकरणमा स्कुलदेखि नै अन्याय र दुब्र्यवहार सहन हुँदैन भन्ने कुरा सिकाउनु पर्छ ।
तर त्यसको उल्टो घर परिवार, स्कुल देखी नै महिलाहरुलाई तिमी छोरी हौ बोल्न हुँदैन भनेर सिकाइएको छ । महिला निजामतीतर्फका कर्मचारी सुरुदेखि लोकसेवाबाट आउने हुँदा हिंसा कम हुन्छ । तर काम गर्दै जाँदा कालान्तरमा यौन भन्दा पनि अन्य दुव्र्यवहार सहँदै जानुपर्दो रहेछ भन्ने निजामती सेवा मै रहेका ठुलो संख्यामा महिलाहरुले बताउने गरेका छन । तर उनीहरु पनि आफ्नो नाम नै वाहीर ल्याएर बाहीर आउन चाहादैनन वा सक्दैनन, त्यस्ता उदाहरणहरु पनि भेटिएका छन । हरेक कार्यालयमा गुनासो पेटिका राखीएको हुन्छ । अनेक खालका गुनासाहरु आउछन तरयस्तो महत्वपुर्ण विषय दुब्र्यब्याहार वा यौन शोषणका घटनाहरुका बिषयमा भने गुनासो नै आउदैन । जुन कुरा बिभिन्न कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारीले बताउने गरेको पाईन्छ ।
अर्को कुरा महिलाले महिला९महिला भन्नु भन्दा पनि महिलाभन्दा माथि उठेर पुरुषसँगको सहकार्यमा अघि बढ्नुपर्छ । यो नै अहिलेको आवश्यकता पनि हो । अहिले आएको ऐनले केही हदसम्म काम गर्ला तर सँगसँगै चेतना, सोच वा दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ र त्यसका लागि सबै लागिपर्नु पर्छ । कामकाजी महिलाहरूका लागि यो ठूलो समस्या हो । पुरुष पुरुषै हुन् तर महिलाले सहनुपर्छ भन्ने मानसिकता छ । महिलाहरू यस्ता समस्यामा परिणाम के हुन्छ भनेर बोल्न डराउँछन् । दुव्र्यवहारै नभए पनि बढुवा, तलब जस्ता कुरामा विभेद गरिन्छ ।
विदेशतिर हेर्दा पुरुषविरुद्ध पनि दुव्र्यवहार हुन्छ भनिन्छ तर हामीकहाँ पुरुषले मात्र महिलाप्रति दुव्र्यवहार गर्छन् भन्ने गरिब मानसिकताबाट हामी गुज्रीरहेक छौं । यो पनि अर्को खालको एउटा मानशिकताको समस्या हो । यो पनि चिरीतन आवश्यक छ, समानतामा पक्षरहीत धारणा बन्दै जानुपर्छ । दुव्र्यवहारका शैली फरक९फरक हुन्छन् । बाहिरबाट हेर्दा जिस्काएको त हो नि भनिन्छ तर त्यसले दुव्र्यवहारमा पर्नेलाई भित्रभित्रै अप्ठ्यारो पारेको हुन्छ । दुव्र्यवहार भोग्ने व्यक्ति ग्लानिको सिकार हुन्छन् । उनीहरू अघि बढ्न डराउँछन् ।
छोरी मान्छेले धेरै हाँस्न९बोल्न हुँदैन सहनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिले महिलालाई अझ दबाएको देखिन्छ । जति दबेर बस्यो समस्या बढ्दै जान्छ । आफूप्रति दुव्र्यहार भएको कुरा भनियो भने भोलि आउने परिणाम के होला रु अफिसबाट निकालिनु पर्ला वा बढुवा रोकिएला अथवा सुविधा कटौती होला भन्ने त्रासले महिलाहरुलाई सताइरहन्छ भन्नेहरु धेरै छन । हामीकहाँ पनि कार्यस्थलमा भएको हिंसाका कारण आत्महत्या गर्नसम्म बाध्य भएका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।
मानसिक किसिमका दुव्र्यवहारलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी प्रमाणित गर्ने भन्ने चुनौतीहरू छन् । यस्ता समस्या न्यून गर्न मैले यसविरुद्ध आवाज उठाउन सक्छु कि सक्दिन रु म को हुँ रु भनेर आफैंलाई चिन्न सक्नुपर्छ । आफ्ना बालबालिकालाई यस विषयमा के सिकाउन सकिन्छ त्यो आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । ऐन आएको राम्रो हो तर यस्तो ऐन पनि छ है भनेर सबैलाई सूचना नदिई, यो विषयमा चेतना नजगाई ऐन आएर मात्र केही हुँदैन ।
न्याय आजकाल न्याय अदालतको ढोकामा चिच्याई रहेको देख्छु मैले भने , खै किन भित्र नपसेको ? अदालतको ढोका र झ्याल त खुल्यै छन् १ न्याय म सँग झोक्किदै भन्यो म झ्याल र ढोका बाट छिर्ने होईन दिमागबाट छिर्ने हुँ त्याहाँ बाक्लो टोपिको स्वाभिमानले...
२०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान नेपाली जनताले पहिलो पटक आफैले चुनेका प्रतिनिधीहरु मार्फत बनाएको प्रथम संविधान हो । अर्थात, यो जनताको संविधान हो । सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो संविधानसभाको चुनावमा नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा...
किन ? मन स्पष्ट नभई नभई मतदान
वर्तमान विश्व समुदाय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र यसका सारभूत तत्वहरुबाट निर्देशित छ । तानाशाही राज्यव्यबस्था र केन्द्रिकृत शक्ति परिचालन बाट विश्वले जे जति पाठ सिकेको छ ती पाठहरू आजको समयलाई पर्याप्त छ । तसर्थ...
नयाँ संविधान बमोजिम देश संघीयतामा गई सकेको र कार्यन्वयनको पाटो पनि सँगसँगै अघि वढिरहेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले गत भदौ ५ गते देखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट नम्बर जडान...
संविधान संसोधनको चक्रब्यूह
काठमाण्डौ नयाँ संविधान देशले त पायो तर संविधानलेनै आफुहरुका मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै संविधान निर्माण पछि असन्तुष्ट बन्दै आएको मधेशी मोर्चा र पछि आएर राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि असन्तुष्ट बन्दै गएको परिप्रेक्षमा वर्तमान...
थापालीस्थित ट्रेड टावरको गेटबाट निस्कीएर दायाँ मोडिएका एक सवारीचालक आफ्नो गन्तव्य तिर लम्कदै थिए अकस्मात त्यसलाई यहाँ ले भनी ट्राफिक प्रहरीको आवाज सुन्दा चालक पनि सरा सर आफ्नो सवारीसाधन लिएर ट्राफिक प्रहरी छेउमा गए...
पत्रकारको दैनिकी: इज्जत र प्रतिष्ठाको लडाईमा कलम र कापीको सहारा
प्रतिष्ठित पत्रकार ! यो पंत्ति लेख्न नहुने हो, तर संयोगले लेख्नु पर्ने भयो । प्रतिष्ठितको अर्थ इज्जत, मान मर्यादा, सम्मानित र पुरा रुपले स्थापित भएको भन्ने अर्थ लाग्छ । पत्रकार पेशा पनि एउटा आफैमा...